Mmadụ 41 nwụrụ, ọtụtụ na -efu na mbuze na idei mmiri India
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Mmadụ 41 nwụrụ, ọtụtụ na -efu na mbuze na idei mmiri India
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mmadụ 41 nwụrụ, ọtụtụ na -efu na mbuze na idei mmiri India.
Ihe karịrị ndị njem nlegharị anya 100 rapaara n'ime ebe ezumike na Ramgarh mgbe oke osimiri Kosi tojuburu na mpaghara.
Mmadụ iri atọ na ise nwụrụ na mbuze ukwu na Tuesday na steeti Himalayan nke Uttarakhand.
Dịkarịa ala, mmadụ 30 nwụrụ n'ihe asaa dị iche iche na mpaghara Nainital nke kacha emetụta na mbido Tuesday.
Ndị ọrụ gọọmentị na -ekwu na ọrụ nnapụta a ga -ewe opekata mpe ụbọchị abụọ ruo atọ na ọtụtụ ndị mmadụ ka na -efu.
Dị ka ndị ọrụ gọọmentị India si kwuo, ọ dịkarịa ala, mmadụ 41 anwụwo na ọtụtụ na-efu efu na mbuze na idei mmiri na ugwu India, nke oke mmiri ozuzo kpatara.
A kọrọ na mmadụ 35 nwụrụ na mbibi ọhụrụ na Tuesday mgbe mmadụ isii nwụrụ n'ihe omume yiri ya otu ụbọchị tupu mgbe ahụ, na steeti Himalayan nke Uttarakhand.
Ọ dịkarịa ala, mmadụ 30 nwụrụ na ọtụtụ ndị ka na-efu na ihe omume asaa dị iche iche na mpaghara Nainital nke kachasị emetụta na mbido Tuesday, mgbe igwe ojii na-agba-nnukwu oke mmiri ozuzo-kpatara ọtụtụ ọdịda ala ma bibie ọtụtụ ụlọ.
Ọtụtụ mpaghara dịpụrụ adịpụ na mpaghara ugwu ugwu hụrụ mmebi zuru oke na oke mmiri ozuzo.
Ndị agha, National Response Force na ike mmeghachi omume ọdachi steeti na -enye aka na ọrụ nnapụta ugbu a na Uttarakhand.
Ndị ọrụ gọọmentị kwuru na ọrụ nnapụta a ga -ewe opekata mpe ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ na ọtụtụ mmadụ ka na -efu.
Mwepụ ọzọ na mpaghara Almora nke ugwu gburu mmadụ ise mgbe nnukwu okwute na mgbidi apịtị kwaturu wee rie ụlọ ha.
Dịkarịa ala, mmadụ isii ndị ọzọ nwụrụ na Mọnde na mpaghara abụọ dịpụrụ adịpụ nke steeti.
The Ngalaba ihu igwe nke India gbasaa ma gbasaa anya ihu igwe ya na Tuesday, na -ebu amụma na oke mmiri ozuzo “ga -adị oke” na mpaghara n'ime ụbọchị abụọ na -abịa.
Ụlọ ọrụ na -ahụ maka ihu igwe kwuru na mmiri karịrị 400mm (sentimita 16) kpuchiri ọtụtụ ebe ụnyaahụ, na -ebute mbuze na idei mmiri.
Ndị ikike nyere iwu ka emechie ụlọ akwụkwọ ma machibido ihe omume okpukpe na njem nlegharị anya na steeti ahụ.
Ihe karịrị ndị njem nlegharị anya 100 rapaara n'ime ebe ezumike na Ramgarh, India mgbe osimiri Kosi tojubigara ókè mere iju mmiri n'ọtụtụ ebe.
Ndị na -ahụ maka amụma na -adọ aka na ntị maka oke mmiri ozuzo na ụbọchị na -abịa na steeti Kerala nke ndịda ebe idei mmiri egbuola opekata mpe mmadụ 27 kemgbe Fraịde.
Ọtụtụ ihe mgbochi mmiri dị na steeti ahụ na -abịaru nso n'ihe ize ndụ na ndị ọchịchị na -akpọpụ puku kwuru puku gaa ebe dị nchebe ka nnukwu osimiri jubigara ókè.
IndiaỌfịs ihu igwe kwuru na oke mmiri ozuzo ga -ezo steeti ahụ n'ime ụbọchị abụọ na -esote mgbe ezumike nwa oge taa.